Yintoni iMushroom yamayeza-iWuling (Fuzhou) Biotechnology Co, Ltd.
Amakhowa amayeza anokuchazwa njengefungus macroscopic esetyenziswa ngohlobo lwezicatshulwa okanye umgubo wokuthintela, ukunciphisa, okanye ukuphilisa izifo ezininzi, kunye / okanye ukulinganisa ukutya okusempilweni. UGanoderma Lucidum (Reishi), Inonotus obliquus (Chaga), Grifola Frondosa (Maitake), Cordyceps sinensis, Hericium erinaceus (Lion's Mane) kunye neCoriolus versicolor (umsila waseTurkey) yonke imizekelo yamakhowa amayeza.
Amakhowa aqatshelwe ngexabiso lawo lesondlo kunye neempawu zonyango njengamawaka eminyaka. Uvavanyo olubanzi lweklinikhi lwenziwe kwihlabathi liphela, ngakumbi e-Asiya nase-Yurophu apho bezisetyenziswa khona kunyango lwesintu kangangeenkulungwane. Bafumene iipolysaccharides ezininzi kunye neepolysaccharide-protein complexes kumayeza amakhowa abonakala ekhuthaza ukuphendula komzimba.
Uhlobo olunomdla kakhulu lwe-polysaccharide yi-beta-glucan. I-Beta-glucans zibonakala ngathi zinceda amajoni omzimba ngendlela izifundo ezibonisa ukuba inokuba nakho ukuba yiarhente yomhlaza. Xa ii-beta-glucans ezivela kumakhowa kaReishi zazisetyenziswa ngokudibanisa imitha kwiimpuku ezinomhlaza wemiphunga, kwabakho ukuthintelwa okubalulekileyo kwithumba metastasis (ukukhula kobunzima bomhlaza). Kubonakala ngathi eyona nto ibalulekileyo yindlela amakhowa amayeza ayikhuthaza ngayo kunye nokuguqula impendulo kumzimba. Ngapha koko, oku kukhuthaze indawo ethembisayo yophando ngomhlaza, ebizwa ngokuba ngumhlaza fungotherapy. Amakhowa amaninzi abonise ukukwazi ukuthintela i-enzyme aromatase evelisa i-estrogen kwaye ke inokuzikhusela kwisifuba kunye neminye imihlaza enxulumene neehomoni. Nokuba iqhosha eliqhelekileyo le-mushroom lineempawu ezithile zokuthintela i-aromatase.
Ezinye izibonelelo ezinokubakho zamakhowa kunye nefungi:
• Ukumodareyitha komzimba
• Thintela ukukhula kwethumba
• Isichasi magciwane
• Impilo yentliziyo
• Ukunciphisa i-cholesterol
• Ukutshatyalaliswa emzimbeni
• Ukukhusela isibindi